Waxbarashada dadka waaweyn | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Waxbarashada dadka waaweyn
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay waxbarashada dadka waaweyn. Waa muhiim in wax la barto qof weyn ahaan gudaha Iswiidhan. Dad badan waxay wax u bartaan sababtoo ah waxay doonayaan inay bartaan xirfad. Qaar kalena waxay wax u bartaan sababtoo ah inay doonayaan inay ku horumaraan dhinaca xirfadooda. Dad badan waxay xitaa wax u bartaan sababtoo ah inay xiiso iyo farxad leedahay in la barto waxyaabo cusub.
Qoraalkan waxaad ku akhrin doontaa wixii ku saabsan nooca fursadaha jira dhinaca waxbarashada dadka waaweyn ee gudaha Iswiidhan.
Xaqa loo leeyahay waxbarasho
Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin waxbarasho. Waxbarashada aasaasiga ah waa khasab oo waa bilaash. Waxbarasho xirfad iyo waxbarasho farsamo waa inay wax la heli karo u ahaato dadka oo dhan. Waxbarasho sare, sida jaamicad ama jaamicad sare, waa inay u furnaato dadka oo dhan.
Iswiidhan waa bulsho aqooneed. Waxbarasho maaha xuquuq oo keliya, laakiinse badanaaba waa xitaa khasab si loo kordhiyo fursadaha dhinaca shaqo.
In la doorto waxbarasho
Adigaaga doonaya inaad wax barato waxaad kala dooran kartaa waxbarashooyin kala duwan taas oo ku xiran waxa adigu aad doonaysid inaad barato, haddii aad horey wax u soo baratay iyo nooca qaabka in wax loo barto ee adiga kugu haboon.
Dhammaan dadka wax baranaya waxay xaq u leeyihiin waxbarasho isku qiime ah iyo fursada in loo horumaro si waafaqsan qofka awooddiisa gaarka ah. Haddii aad leedahay tusaale ahaan hoos u dhac awoodda ah waxaad xaq u leedahay inaad hesho alaabta caawimaadda ee aad u baahantahay si aad uga qaybqaadato waxbarashadan si leh xaalado la mid ah sida ardayda kale. Ardayda oo dhan waxay leeyihiin baahiyo kala duwan oo waxay u baahan karaan taageero kala duwan si ay ugu guuleystaan waxbarashadooda.
Iyadoo aanay ku xirnayn jinsiga waa in dadka oo dhan helaan fursad isku mid ah dhinaca waxbarasho. Balse caadooyin ayaa ka jira bulshada kuwaas oo raad ku yeesha nooca waxbarasho ee ragga iyo haweenku raadsadaan. Tusaale ahaan haweenka ka badan ragga ayaa wax ka barta dhinaca daryeelka caafimaadka, iskoolada iyo xanaanada waayeelka. Raggu waxay badanaaba bartaan waxbarashooyin ah dhinaca farsamada iyo xisaabta.
Fursado waxbarasho oo noocee ah ayay haystaan dadka waaweyn ee dalka ama dalalka aad horey ugu noolayd?
Waxaa jira waxbarashooyin kala duwan oo badan looguna talogalay dadka waaweyn
Waxaa jira waxbarashooyin ah:
Heerka dugsiga hoose-dhexe
Heerka dugsiga sare ka dambeeya
Haddii aanad hubin waxa aad baran karto waxaad la xiriiri kartaa la taliyaha waxbarashada iyo xirfada. Iyaga ayaad ka heli kartaa taageero iyo macluumaad kaa caawisa inaad gaarto go’aanka hadafka waxbarasho iyo hadafka xirfad. La taliye waxbarasho iyo xirfad badanaaba waa laga helaa iskoolada dadka waaweyn ee degmadaada, tusaale ahaan waxbarashada dadka waaweyn ee komvux, jaamicadaha iyo jaamicadaha sare. La xiriir degmadaada si aad wax dheeraad ah uga ogaato.
La taliyaha waxbarashada iyo xirfada ayaad xitaa ka heli kartaa caawimaada:
in la dalbada shahaadada waxbarashadaada
in la codsado boos ah waxbarashooyinka kala duwan iyo koorsooyinka
warbixin ku saabsan waxa aad u baahantahay si aad u gasho waxbarasho ama koorso
macluumaadka kale ee ku saabsan waxbarasho iyo suuqa shaqada
Haddii aad ka weynaatay inaad wax ka barato dugsiga hoose-dhexe ama dugsiga sare waxaad taas baddelkeeda aad tusaale ahaan wax ka baran kartaa waxbarashada dadka waaweyn ee degmada ama dugsiga dadka waaweyn. Dhinaca heerka dugsiga hoose-dhexe waxaad baranaysaa maadooyin u dhigma kuwa lagu barto dugsiga hoose-dhexe. Dhinaca heerka dugsiga sarena waxaad ku baranaysaa maadooyin u dhigma kuwa lagu barto dugsiga sare.
Waxbarashada dadka waaweyn ee degmada waxaa badanaaba lagu magacaabaa komvux.
Ka hor waxbarasho ayaa la qiimeeyaa aqoontaada, si waxbarashadan ugu bilaabmi karto heer sax ah. Adigu waxaad komvux ka baran kartaa hal ama dhowr koorso. Adigu waxaad wax baran kartaa wakhti buuxa ama wakhti nus ah.
Dhinaca komvux waxaad ka baran kartaa af Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga, SFI.
La xiriir degmadaada si loo helo warbixin dheeraad ah oo ku saabsan SFI. Haddii aad ka diiwaan gashantahay Xafiiska Shaqada kana qayb qaadato barnaamijka meelaynta waxaad la xiriiri kartaa hawl-wadeenkaaga jooga Xafiiska Shaqada.
Akhri dheeraad ku saabsan sida aad u baran karto af Iswiidhishka kuna qoran bogga "Waxbrasho" ee Informationsverige.se
Komvux oo ah waxbarasho gaar ah
Komvux oo ah waxbarasho gaar ah waxaa loogu talogalay adigaaga leh hoos u dhac awoodda caqliyan ah ama qaba dhaawac maskaxda ah.
Dhinaca komvux ah waxbarasho gaar ah waxaad awooddaa inaad:
ka barato heerka dugsiga hoose-dhexe ama dugsiga sare,
kala doorato koorsooyin kala duwan,
ka barato af Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga isla mar ahaantaas,
dhigato waxbarasho ku jiheysan xirfad.
akhrido shahaado u dhiganta dugsiga sare ee dadka leh hoos u dhac awoodda caqliyan ah iyo in aqoontaadi hore laguu qiimeeyo.
Waxaad la xiriiri kartaa la taliyaha waxbarashada iyo xirfada ee degmadaada haddii aad hayso su’aalo ku saabsan waxbarashooyinka xirfada.
Waxbarashada wax barida waa nooc waxbarasho xirfad oo ka jirta komvux. Waxaad dhigan kartaa waxbarasho wax barid si aad u hesho waxbarasho xirfad oo aasaasi ah iyo khibrad dheeraad ah oo xirfad. Qayb badan oo ka mid ah waxbarashada wax barida waxaad joogtaa goob shaqo. Goobta shaqada ayaad ku leedahay qof mas’uul kaa ah oo kaa caawinaya inaad barato xirfad.
Akhri dheeraad ku saabsan waxbarashada suuqa shaqada oo ku qoran bogga Xafiiska Shaqada.
Waxbarasho iyadoo aan goobta la joogin iyo waxbarashada fog
Haddii aad dhamaysatay waxbarasho dugsiga sare ah waxaad sii wadan kartaa inaad wax ka barato heerka dugsiga sare ka dambeeya, tusaale ahaan jaamicad sare, jaamicad ama machadka xirfada.
Halkan ayaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan u qalmida.
Halkan ayaad ka akhrin kartaa qiimeynta waxbarashada ajnabiga ah.
Haddii aad doonaysid inaad wax dhigato heer cilmi-baare waxaa shuruud u ah inaad haysato shahaado ah heer sare. Waxbarashada heer cilmi-baare waa laba ama afar sano. Marka aad dhammaystirto waxbarashadan ayaad helaysaa shahaado ruqsad ama shahaado diktoor.
Urur waxbarasho iyo koox dad ah oo wax wada baranaya
Waxaa jira xitaa qaabab kale oo wax loo baran karo ama qofku u horumarin karo aqoontiisa. Dhinaca urur waxbarasho waxaad tusaale ahaan wax dheeraad ah ka baran kartaa wax aad xiisayso ama heli kartaa hiwaayad cusub.
Adigu ma helaysid wax shahaado ah ka dib markaad ka mid ahayd koox dad ah oo wax wada baranaya ama waxbarasho kale oo urur waxbarasho diyaariyay. Laakiin waxaad baran kartaa wax cusub lana kulmi kartaa dad kale oo wax isku mid ah aad xiisaynaysaan.
Nooca kaalmo iyo amaah ee aad codsan karto waxay ku xirantahay da’daada, iyo heerka waxbarashadaada.